Ungalilungisa Kanjani Ifayela le-Excel Elonakele noma Elimele
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Excel Repair Ungalilungisa Kanjani Ifayela le-Excel Elonakele noma Elimele
Lapho amafayela wakho we-Microsoft Excel .xls, .xlw kanye .xlsx elimele noma onakalisiwe ngenxa yezizathu ezahlukahlukene futhi awukwazi ukuwavula ngempumelelo nge-Excel, ungasebenzisa izinyathelo ezilandelayo ukulungisa ifayili elonakele:
Qaphela: Ngaphambi kuka-starukuthola inqubo yokutakula idatha, udinga yenza isipele sefayela lakho loqobo elonakele le-Excel. Lona most isinyathelo esibalulekile abaningi abazosikhohlwa.
Okokuqala, iMicrosoft Excel inomsebenzi wokulungisa owakhelwe ngaphakathi. Lapho ithola ukuthi kukhona ukonakala kufayela lakho le-Excel, kuzoba ngu-start Ukubuyiselwa Kwefayela Imodi bese uzama ukukulungisela ifayili. Kwezinye izimo, uma ngabe Ukubuyiselwa Kwefayela imodi akuyona i- start ngokuzenzakalela, lapho-ke ungaphoqa i-Excel ukuthi ilungise ifayela lakho ngesandla. Thatha i-Excel 2013 njengesibonelo, izinyathelo yilezi:
Use Ifayela imenyu, chofoza Vula.
Ebhokisini lengxoxo evulekile, khetha ifayela ofuna ukulivula, bese uqhafaza umcibisholo oseduze kwefayela le- Vula inkinobho.
Chofoza Vula futhi Lungisa, bese ukhetha ukuthi iyiphi indlela ofuna ukuyisebenzisa ukuthola ibhuku lakho lokusebenza.
Khetha Ukulungisa inketho uma ufuna ukuthola idatha eningi ngangokunokwenzeka kufayela elonakele.
If Ukulungisa ayisebenzi, bese usebenzisa Khipha idatha ukuzama ukukhipha amanani weseli namafomula kufayela.
Izinqubo zokutakula zihluke kakhulu kuzinguqulo ezihlukile ze-Excel.
Ngokuya ngokuhlolwa kwethu, indlela 1 isebenza kakhulu kumacala lapho ukonakala kwenzeka emsileni wefayela. Kepha ngeke kusebenze lapho ukonakala kwenzeka kunhlokweni noma maphakathi nefayela.
Uma indlela 1 yehluleka, kusekhona izindlela eziningana zokulungisa ifayela lakho le-Excel ngesandla nge-Excel, kufaka phakathi ukubhala i-VBA macro encane, ungathola imininingwane eningiliziwe ku https://support.microsoft.com/en-gb/office/repair-a-corrupted-workbook-153a45f4-6cab-44b1-93ca-801ddcd4ea53
Kukhona namathuluzi wamahhala avela kubantu besithathu angavula futhi afunde amafayela we-Microsoft Excel, ngokwesibonelo,
I-OpenOffice ku- http://www.openoffice.org. Le iphrojekthi yomthombo ovulekile edume kakhulu eyenzelwe ukuxhasa amafomethi wefayela le-Office, kufaka phakathi amafayela we-Excel Isoftware ingasebenza ngaphansi kweWindows.
I-LibReOffice ku- https://www.libreoffice.org/. Elinye ihhovisi lamahhovisi lamahhala.
I-KingSoft Spreadsheets ku https://www.wps.com/. Leli ithuluzi lamahhala leWindows elingavula amafayela e-Excel.
I-Google AmaSpredishithi ku- https://www.google.com/sheets/about/ futhi ingavula ifayela le-Excel online.
Kwesinye isikhathi lapho i-Excel yehluleka ukuvula ifayela lakho, la mathuluzi angakwazi ukulivula ngempumelelo. Uma kunjalo, ngemuva kokuvulwa kwefayela le-Excel, ungavele uligcine njengefayela elisha elizoba namaphutha.
Kumafayili we-xlsx, empeleni aliqembu lamafayela acindezelwe ku- Zip ifomethi yefayela. Ngakho-ke, kwesinye isikhathi, uma inkohlakalo ibangelwa kuphela yi Zip file, lapho-ke ungasebenzisa Zip amathuluzi wokulungisa afana DataNumen Zip Repair ukulungisa ifayili, ngokulandelayo:
Uma ucabanga ukuthi ifayili elonakele le-Excel yi-a.xlsx, kuzodingeka uyiqambe kabusha ibe yizip
Ukusebenzisa DataNumen Zip Repair ukulungisa a.zip futhi ngakha ifayili elihleliwe a_fixed.zip.
Qamba kabusha i-aixed.zip buyela ku -_fixed.xlsx
Usebenzisa i-Excel ukuvula i-_fixed.xlsx.
Kungahle kube khona ezinye izexwayiso lapho uvula ifayela elingaguquki ku-Excel, mane ungalinaki bese i-Excel izama ukuvula nokulungisa ifayili elungisiwe. Uma ifayili lingavulwa ngempumelelo, ungavele ugcine okuqukethwe kwelinye ifayela elingenaphutha.
Uma zonke izindlela ezingenhla zehluleka, kuzodingeka usebenzise DataNumen Excel Repair ukuxazulula inkinga. Izoskena ifayela elonakele bese ikhiqizela ifayili elisha elingenamaphutha ngokuzenzakalela.